Tag: plugin WordPress | Martech Zone
Mandefasa mailaka amin'ny alàlan'ny SMTP amin'ny WordPress miaraka amin'i Microsoft 365, Live, Outlook, na Hotmail
Alakamisy, Aogositra 12, 2021 Alakamisy, Aogositra 12, 2021 Douglas Karr
Raha toa ka mihazona WordPress ho rafitra fitantanana votoatinao ianao, dia namboarina matetika ny rafitra handefasana hafatra mailaka (toy ny hafatry ny rafitra, fampahatsiahivana tenimiafina, sns.) Amin'ny alàlan'ny mpampiantrano anao. Na izany aza, tsy vahaolana tokony ho izy noho ny antony roa ity: ny mpampiantrano sasany dia manakana ny fahafahany mandefa mailaka ivelany avy amin'ny mpizara mba tsy ho kendren'ny mpijirika manampy malware izay mandefa mailaka. Ny mailaka avy amin'ny mpizara anao matetika dia tsy voamarina
Alahady, Martsa 28, 2021 Alahady, Martsa 28, 2021 Douglas Karr
Raha manana horonan-tsary matihanina nandanianao vola dolara an'arivony ny orinasanao dia tokony hamoaka tanteraka ireo sary ao amin'ny YouTube ianao hanararaotanao ny valin'ny karoka YouTube…. alao antoka fotsiny fa manatsara ny horonantsarinao YouTube ianao rehefa manao izany. Izany dia nilaza fa tsy tokony apetrakao ao amin'ny tranonkalanao ny horonantsary YouTube… noho ny antony vitsivitsy: Manaraka ny fampiasana ireo horonan-tsary ireo ny YouTube amin'ny fanaovana doka lasibatra. Fa maninona ianao no te hizara ny anao
Mandeha mitarika bebe kokoa amin'ny mpamorona pejy fitaterana an'i Landingi ho an'ny WordPress
Alarobia, Martsa 3, 2021 Alarobia, Martsa 3, 2021 Douglas Karr
Na dia mampiditra endrika ao amin'ny pejy WordPress fotsiny aza ny ankamaroan'ny mpivarotra dia tsy voatery ho pejin-tsambo manatsara sy manova olona be izany. Ny pejy fitobiana matetika dia manana endrika sy tombony maro mifandraika amin'izany: Fanaparitahana kely indrindra - Hevero ho toy ny faran'ny làlana misy fanelingelenana kely dia kely ny pejy misy anao. Ny fanamoriana, sidebars, footers ary singa hafa dia mety hanelingelina ny mpitsidika anao. Ny mpanamboatra pejy fananganana dia mamela anao hanome làlana mazava mankany amin'ny fiovam-po tsy misy fanelingelenana. Fampidirana - Amin'ny maha a
Iray amin'ireo fitaovana tiako indrindra amin'ny fandrefesana sy famoahana ny fahana RSS-ko na ny podcasts-ko amin'ny media sosialy ny FeedPress. Mampalahelo fa tsy manana fampidirana LinkedIn ny sehatra. Nanatona aho hijery raha hanampy an'io izy ireo ary nanome vahaolana hafa - fanontana amin'ny LinkedIn amin'ny alàlan'ny Zapier. Zapier WordPress Plugin ho an'ny LinkedIn Zapier dia maimaim-poana mandritra ny fampidirana vitsivitsy sy hetsika zato, hahafahako mampiasa an'io vahaolana io